Shiinaha Custom saqafka saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Bacda duffle Bacda duffle > Bacda saqafka
1. Soo bandhigida alaabta ee bacda saqafka:
[shaqeynaya] caddaynta roobka, ka hortagga qorraxda, ciidda oo aan iska ilaalin karin, si fudud loo nadiifin karo.
[Kuwa kale] Cabbirka, midabka, walxaha iyo LOGO waa la habeyn karaa.
Gargaarka: 2 3-mitir oo suumanka dhejiska dheer leh oo labalaab ah, 1 boorso gaar ah oo lagu keydiyo dharka Oxford.
(1) waxqabadka biyuhu aad u sarreeyaan, si ammaan ah ayaa loo buuxin karaa, loo adkeyn karaa oo loo badbaadin karaa.
(2)fududahay in la qaado, marka aan la isticmaalin waa la laaban karaa, boos kuuma fadhiyo.
(3)design iska caabin cimilada, masduulaagii Johnny oo lagu daray wax PVC daahan, daboolida cimiladu weheliso, kululaynta kulul wadajirka daaweynta.
(4)Macno malahan hadii gaariga uu kuxiran yahay shandado shaashad ah iyo inkale, waxaa si sahal ah loogu dhejin karaa saqafka ama daboolka dambe.
(5)laba dhinac oo lagu xidho “nylon zip” iyo saddex dhinac oo furfuran dejinta, samaynta rarka iyo keenista alaabtu waa mid aad u habboon.
(6)faashadda u go'an dhinaca si loo hubiyo badbaadada sanduuqa iyo waxyaabaha gudaha ah. Ku dheji masduulaagii Johnny oo lagu daray daaweynta biyaha iyo gudahaba.
3. Boorsooyinka jilicsan ee saqafku waa jiil cusub oo kacaan ah oo alaab xilli firaaqo ah oo la taaban karo ah
Astaamaheeda suuqa jira waa mid gaar ah, oo ka turjumaya nolol casri ah oo firaaqo ah iyo fikrad cusub oo caan ah. Ku rakibisteeda waxay lamid tahay lahaanshaha gaari afar-sanduuq ah, iyo furitaanka meel cusub oo gaarigaaga ah!
15 CFT saqafka saqafka aan biyuhu lahayn oo leh suuf aan sibiibixan lahayn + 8 garabka garabka oo la xoojiyay + 4 albaabka oo lagu xiro dhammaan boorsooyinka saqafka oo leh / aan lahayn sagxad.
Bacda saqafka is the most practical sand, sunshine, rain, anti-theft and wind resistance wind noise is small!
5. Xirxirida saqafka iyo gaarsiinta
Calaamadaha kulul: Bacda saqafka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka